Tinye Dezie-Na-Ebe ọ bụla Ọdịnaya Management System | Martech Zone
Sunday, November 25, 2012 Monday, November 26, 2012 Douglas Karr
Na 2006, m na-achọ ka ndị mmepe kuru dezie-na-ebe teknụzụ… ma ha emeghị. Afọ isii ka e mesịrị, m ka na-akụzi isi m na ọ nweghị onye mepụtara nnukwu njikwa ọdịnaya iji dezie-na-ebe teknụzụ.
O yiri ka Ntinye ederede na-edozi dezie-na-ebe conundrum maka onye ọ bụla site na -ewu a Universal ike ọrụ. Copybar na-eji API nke ọtụtụ sistemụ njikwa njikwa na-enye gị ụzọ dị mfe iji dezie saịtị gị n'otu ebe, ma ị na-eji Shopify ma ọ bụ WordPress. Ha na-enyekwa nke ha API nke mere na ndị na - eweta sistemụ njikwa ọdịnaya ndị ọzọ nwere ike iwekọta ngwa ọrụ ha dị mfe.
Iji Wụnye na hazi Copybar
Detuo Mpempe Akwụkwọ Mbipụta gị - Kwa mpempe akwụkwọ na-egosipụta aha akaụntụ gị na aha mmewere pụrụ iche. Pịnye ya aka, iji ihe ịtụnanya anyị Ntinye ederede Generator.
Tapawa ya n’ebe ichoro - You nwere ike idowe ihe nzuzo ihe omume ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla ị nwere ike ịbanye HTML. Otu HTML faịlụ gị webhost. Na gị WordPress editọ ke nlele. Na ntọala ntọala maka Tumblr ma ọ bụ Shopify. Kedụ ihe okike ị ga - eji ihe ndị mepụtara na kọpịbarị gị?
Pịa 'Tinye Detuo' - Ibu Ibu gị na peeji nke (ọ kwesịrị ịdị ndụ na ihe nkesa). Pịa bọtịnụ 'Tinye Detuo' ọhụrụ, mee ihe gị, wee pịa 'Chekwa'. Ihe ntinye ederede gị dị ka akụkụ nke ibe gị, mana ị nwere ike ịga n'ihu idezi ya na ndụ. Younwere ike ịgbakwunye ndị na-emekọ ihe ọnụ ka ha nwee ike dezie ya.
Mpempe akwụkwọ abụghị naanị ogwe ngwaọrụ, enwere usoro nhazi ọ bụla dịnụ maka gị. Copybar nwere ngwaọrụ iji jikwaa kọmịlị kọọpị gị niile site na ngwanrọ weebụ kensinammuo. Nwere ike soro onye ọ bụla nke gị Copybar ọcha, ebe ha na-egosi, na ndị ọzọ na-rụkọ ọrụ na ha.
Nye ọnụahịa mara mma dị ịtụnanya, naanị $ 4.95 kwa ọnwa maka ihe ndị a na-akparaghị ókè, ndị na-arụkọ ọrụ na-akparaghị ókè na ikike ịtụgharị baajị Copybar ma ọ bụ gbanyụọ.
Tags: oyiridezie-na-ebeụlọ ahịaWordPress
VIRURL: Ọdịnaya Nkwado na Socialkekọrịta Mmekọrịta
Nov 29, 2012 na 11:56 PM
Daalụ nke ukwuu maka ịkekọrịta otu a. Ọ bụ nnukwu enyemaka. Ezigbo ọrụ!